Kaominina Mangabe, distrikan’i Maevatanana : mamboly vary sy lojy amina velaran-tany goavana ny Somia | NewsMada
Kaominina Mangabe, distrikan’i Maevatanana : mamboly vary sy lojy amina velaran-tany goavana ny Somia
Orinasa iray lehibe miasa amin’ny sehatry ny fambolena ny orinasa Somia, any Mangabe, kaominina ao amin’ny distrikan’i Maevatanana. Somia na Société malgache d’industrie agricole, mamboly vary sy lojy any amin’io kaominina io.
Rehefa nahazo rariny tamin’ny fitsarana ka niverina amin’ny Somia ny taniny any Mangabe, nametraka laminasa mazava ity orinasa ity momba ny voly vary, amin’ny fomba indostrialy. Tanimbary 206 ha no notrandrahin’io orinasa io amin’ny fambolem-bary nandritra ny fotoam-pahavaratra farany teo. Vita tao anatin’ny dimy herinandro ny voly rehetra, noho ny fampiasana ireo milina isan-karazany. Olana nosedraina anefa ny tsy fahampian’ny orana tamin’ity taona ity, mbola niampy ny fihanaky ny valala. Sambany vao nisy vao nisy valala tany amin’io faritra io. Iray volana mialoha ny fotoam-pijinjana, ny volana avrily lasa teo, 110 ha sisa no nisy vary, simban’ny haintany sy ny valala avokoa ny fambolena.
Na izany aza, izay vokatra kely sisa, nanafarana mpijinja avy any amin’ny kaominina maromaro, ankoatra ny avy ao an-toerana. Nisy ny avy any Mampikony, Manerinerina, fa nisy ihany ireo efa ampy traikefa avy any Alaotra sy Fandriana. Mijery vahaolana ho an’ny fotoam-pambolena manaraka ny Somia ankehitriny, ka nangataka fahazoan-dalana hametraka milina misinton-drano, afaka manondraka tanimbary. Hampiana ireo milina efa any an-toerana, homena fiofanana ny tantsaha, hampiasana ny zezika biolojika, fanafody famonoana bibikely, sns.
Voly lojy na “black eyes”
Misy koa ny tetikasa iray goavana ataon’ny orinasa Somia ihany, momba ny fambolena lojy na “black eyes” amina velaran-tany midadasika, 150 ha ao Mangabe, miampy 200 ha any Ambinanikely. Miankina amin’ny hamandon’ny tany ny mahatsara ny voly lojy, izay vokatra ao anatin’ny fotoana fohy, 90 andro monja. 600 t ny tanjona amin’ireo velaran-tany ireo. 2.000 na 2.500 Ar ny kilao avy any amin’ny mpamboly. Betsaka ireo mpandraharaha mpanondrana vokatra any ivelany mitady ity vokatra ity, noho ny fitomboan’ny tinady eo amin’ny tsena iraisam-pirenena.
Manampy ny lafiny sosialy ao Mangabe ny orinasa, fanomezana simenitra hanamboarana sekoly sy dabilio ho an’izany sekoly izany. Rehefa mitondra ny anjara biriky amin’ny asa fampandrosoana toy izany ny tsy miankina, andrasana ny fanjakana amin’ny adidy tandrify azy, indrindra ny fanamboaran-dalana sy famatsiana herinaratra ao an-tanàna.